Cinnamon 3.2 ichaisa akamira mapaneru senge Kubatana | Linux Vakapindwa muropa
Sezvaanowanzoita pamwedzi, Clem Lefebvre aburitsa runyorwa rweLinux Mint pamwedzi. Chirevo chiri kupa muto wakawanda kune avo vanofarira chirongwa nekuti ivo havana kungoziva Mint Bhokisi idzva, pc diki ine Linux Mint asiwo Akataura nezve nhau dzichaunzwa neCinnamon 3.2 kuLinux Mint 18.1.
Iyi vhezheni yeLinux Mint ichabuda mavhiki mashoma mushure meUbuntu 16.10Izvi zvinoreva kuti kupera kwaNovember hatizove neLinux Mint 18.1 chete asi tichavawo neshanduro itsva yeCinnamon.
Nhau dzeCinnamon 3.2 dzichava dzinonakidza uye kunyangwe dzisiri dzakawanda, chokwadi ndechekuti vanozoisa pamberi uye shure kweprojekiti. A) Hongu, Sinamoni 3.2 inobvumidza kushandiswa kwemapaneru akatwasuka, mapaneru akafanana neiyo Ubuntu Unity pani.
Cinnamon 3.2 inozopedzisira yatora mukana wekushandisa akamira mapaneru senge muUni
Asi ichi hachisi icho choga chinhu asi zvakare unogona kushandisa accelerometer yezvigadzirwa zvakadai semapiritsi kana makomputa anazvo, nenzira yekuti nekutenderera iyo skrini, iyo desktop inotendererawo ichichinjira kuchinzvimbo chitsva.
Uye zvakare, Cinnamon 3.2 ichaita nyowani gadziriso izvo zvichavandudza mashandiro edesktop. Panguva ino ndivo chete nhau dzatinoziva nezvadzo, asi hapana mubvunzo kuti inhau dzinonakidza kune wese munhu.
Zvakanaka, hatifanire kukanganwa kuti kuwedzera kwevashandisi muCinnamon kwaikonzerwa kwete chete neGnome Shell asiwo nekutorwa kweUbatana, desktop ine mapaneru akatwasuka seCinnamon 3.2 ikozvino. Saka zvinoita sekudaro Shanduko iyi inogona kuita sarudzo kune vashandisi kwete chete yeLinux Mint asiwo yedesktop, Zvakanaka, Cinnamon haisi kungowanikwa chete kuLinux Mint kana Ubuntu, nerombo rakanaka kuti inowanikwawo kune kumwe kugovera.
Ini pachangu handifarire mapaneru akamira zvakadaro Ini ndinogara ndichisarudza yakanaka doko kumapaneti akamira kana akatwasuka. Uku ndiko kunogona kunge kuri kupera kwemapaneru matsva akamira Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Cinnamon 3.2 ichaita mapaneru akamira senge Kubatana
Pakutanga zvinoita senge sarudzo inosuruvarisa kana munhu akafunga kuti ndosaka pakave nekusiya kukuru kubva kuUbuntu, isu tichafanirwa kuona mashandisiro azvo, kana ari ekusarudza hapana chinoitika uye ivo vanongopfumisa desktop, ini ndoda doko rakareruka uye rakanaka, Docky.
Yakanga iri nguva, chaive chimwe chezvinhu izvo Cinnamon yakashaikwa. Ini ndinofungidzira kuti vapfuri vanozove nayo pamberi: D
Zvichava zvirinani kumirira kuti uone chisikwa usati wapa maonero ako, ini handisati ndambofarira iyo Gnome kana Kubatana bar uye, pamusoro pezvose, ndisina menyu yakarairwa seCinnamon. Zvinotsamwisa zvakanyanya kana iwe usiri kurangarira zita rechikumbiro kuti utsvage kuburikidza nemenyu pasina odha ye ulility. Iyo yekubatana bar ndinoiona ichinyatsogadzikana yakatwasuka nekuti yakatwasuka, hapana chauinacho, pasina nguva zvese zvinhu zvinoungana, zvakatwasuka zvine nzvimbo yakawanda.
iyo yakatwasuka pani iri padhuze nemenyu yepasirese ndiwo madhata anondisunga kubatana T_T
Imwe tweet inokwana kuvhara systemd pane maLinux masisitimu
Pindura kuna debianita
Uye kupfuura zvese, isu vedu vanoshandisa Bumblebee nechero distro vanogona kuvhura mafomu kubva kune iyo kuvhura pasina kuenda kuburikidza neconsole. Ingangoita ingangoita seGeForce Zvakaitika (mune nyaya yekushandisa NVIDIA) yeWindows, ichigara iine maIntel graphic akaiswa kusvikira isu tamhanya kubva panhare.
Yakabviswa kubva: https://windtux.com/se-anuncian-los-cambios-mas-destacables-que-vendran-con-cinnamon-3-2-en-la-proxima-version-18-1-de-linux-mint